Microsoft ले Surface Book2| को अस्तित्व पुष्टि गर्दछ ग्याजेट समाचार
Microsoft ले Surface Book2को अस्तित्व पुष्टि गर्दछ
भर्खरका महिनाहरूमा हामी नोभेम्बर महिनाको समयमा माइक्रोसफ्टले चाँडै शुरू गर्ने नयाँ उपकरणहरू बारे धेरै कुरा गरिरहेका छौं। ती मध्ये एक सतह एआईओ र साथै नयाँ भूतल प्रो is छ। कोही-कोही भन्छन कि माइक्रोसफ्टले एक माइक्रोसफ्ट सरफेस बुक २ जारी गर्नेछ तर यस ग्याजेटको बारेमा माइक्रोसफ्टले अहिले सम्म यसको बारेमा केही भनेको छैन।
मा इन्स्टाग्राम खाता माइक्रोसफ्ट छ सतह पुस्तक २ को एक टिजर देखा पर्‍यो। एक छवि जसले अस्तित्व मात्र होइन माइक्रोसफ्ट उपकरणको आउँदो रिलीजलाई स indicate्केत गर्न सक्छ।
यो टिजर धेरै ग्याजेट प्रकट गर्दैनबरु, यो अँध्यारो ल्यापटप वा ट्याब्लेट हुनेछ (तपाईं सर्फेस बुक निर्धारित गर्न चाहानुहुन्छ)। यद्यपि यस मोडेलको अस्तित्व माइक्रोसफ्टले पुष्टि गरेको तथ्य बढी महत्त्वपूर्ण छ। साथै, यो माइक्रोसफ्ट भित्रमा वर्षको एक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हार्डवेयर घटना भन्दा पहिले गरिएको छ, यस २०१2मा Surface Book 2016 को शुभारंभको बारेमा शंका र अफवाहहरू बढी छन्.
माइक्रोसफ्टको टीजरले एक सरफेस बुक २ को अस्तित्व प्रमाणित गर्‍यो, तर के यो छिट्टै नै रिलीज हुनेछ?
धेरैले दावी गर्दछ कि यो छवि आउन लागेका चीजहरूको टीज़र होइन बरु हो एक प्रोटोटाइप भूतल पुस्तक जुन कर्मचारीहरूले सिर्जना गर्छन् तर त्यो कम्पनी अन्ततः खारेज छ। यो हुन सक्छ, हामीसँग माइक्रोसफ्टबाट जानकारी छैन, तर कुनै पनि केसमा उपकरणको अस्तित्वको बारेमा शंका नभई लन्चको बारेमा हुनेछ।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कि माइक्रोसफ्टको उपकरण, सरफेस बुक २ ले त्यति सस्तो पाउँदैन किनकि सर्फेस प्रो ((वा)) को उहि उर्जा वा बढी छ र किबोर्ड र ट्याब्लेटको रूपमा काम गर्दछ। तर यस्तो देखिन्छ, प्रयोगकर्ताहरू यस मोडेलको साथ खुसी छन्, यति सम्म कि एक मात्र दोष जुन अहिले सम्म भेट्टाइएको छ काज द्वारा बनाईएको उद्घाटन हो के सतह पुस्तकमा यो मात्र समस्या छ? के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि माइक्रोसफ्टले यस २०१ 2016 मा सर्फेस बुक २ सुरू गर्नेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » ल्यापटपहरू » Microsoft ले Surface Book2को अस्तित्व पुष्टि गर्दछ
LG ले LG V20 को नयाँ टिजर प्रकाशित गर्दछ जसमा यसले Android Nougat भएकोमा गर्व गर्दछ
२०१3को सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A5, A7 र A2017 धेरै चाँडै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ